Progressive Stampings - Qaab Shiinaha QiDi caaga
Wax taaj oo kale duritaanka caaga
Appliance qoyska Small qayb
qaybo xoqad xiddigaha
Qaybo ka Birta Gurdanka
qaybaha timaha ka qalleyl
waxyaabaha soo ururay oo loogu talagalay macaamiisha
Workshop wax taaj oo kale duritaanka caaga
Gurdanka Progressive waa metalworking hab in koobi karo feedh , Cukuse , foorarsiga iyo dhowr siyaabo kale oo bedelayaan biraha wax cayriin, weheliso hab quudinta automatic.
Nidaamka quudinta riixo strip ka mid ah biraha (sida unrolls ka gariiradda a) iyada oo loo marayo oo dhan ka mid ah saldhigyada of dhinta Gurdanka horusocod ah. Goob kasta oo qabata mid ama ka badan hawlgallada ilaa qayb ka mid ah la dhammeeyayna la sameeyo. Idaacadda final waa hawlgal xadka ah, taas oo kala qayb la dhammeeyayna ay ka web ka waday. Web The waday, oo ay la socdaan biraha la feeray marti hawlgallada hore, waxaa lagu daaweeyaa sida biraha duugga ah . Labadaba waxaa ka jareen, garaacis (ama ka dhinto) iyo markaas ka go'an u dhintaan saaray, iyo in wax soo saarka mass waxaa inta badan loo wareejiyay biinka duugga ah via duugga ah dhulka hoostiisa wax suunka conveyor.
The horumar u dhinta Gurdanka la dhigayaa galay reciprocating a jediyay jaraa'id . Sida warbaahinta kor dhaqdhaqaaqa, u dhintaan top guuro la, kaas oo u ogolaanaya wax ay ku quudiyaan. Marka saxaafadda hoos u guuro, dhinta xirmin iyo qabata hawlgalka loo soo jediyay. Iyada oo stroke kasta saxaafadda, qayb ka mid ah dhameystirtay laga saaro u dhintaan.
Tan iyo shaqo dheeraad ah waxaa loo sameeyaa in kasta "station" ee u dhintaan, waxaa muhiim ah in aaladda la hormartay aad si hufan si ay u astaysanyahay dhowr kun ee inch ah gudahood sida ku dhaqaaqdo saldhigga saldhiga. Rasaas qaabeeya ama "duuliye" toobinta geli godad wareega hore wareemay in strip ahaa in la hubiyo in lays tan iyo hab quudinta sida caadiga ah ma siin karaan sax lagama maarmaanka ah oo dherer ah feed.
Gurdanka Progressive sidoo kale la soo saaray karaa macsarada kala iibsiga. Kuwani waa macsarada in lagu wareejiyo qaybaha ka mid ah saldhiga ku xiga iyadoo la isticmaalayo "faraha" farsamo. Waayo, wax soo saarka mass ee qaybo ka tuntay kuwaas oo u baahan adag hawlgallada in-saxaafadeed, waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in la isticmaalo saxaafadda horusocod ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka noocan ah saxaafadda waa markii wareegga wax soo saarka. Ku xidhan qaybta, soosaarid si fudud u ordi karaan iyo sidoo kale in ka badan 800 qaybo / daqiiqo. Mid ka mid ah khasaaraha noocan ah saxaafadda waa in aysan ahayn mid ku haboon sax sare sawir qoto dheer taas oo ah marka si qoto dheer ee Gurdanka ka badan dhexroorka of qayb ka mid ah. Haddii loo baahdo, habka this waxaa la sameeyaa dul-saxaafadeed kala iibsiga ah, kaas oo ay maamulaan xawaare gaabis ah, oo ay ku tiirsan yihiin faraha farsamo si uu u qabto qayb ka ah meel inta lagu jiro wareegga dhan la xirrira. In the case of saxaafadda horusocod ah, qayb kaliya ee wareegga la xirrira hanuuntaan karo by gacmo guga raran ama la mid ah, taas oo keeni in concentricity iyo ovality arrimaha iyo labis aan dhumucda wax. Khasaaraha kale ee macsarada horumar marka la barbar dhigo si ay u gudbiyaan macsarada waa: kordhay wax cayriin talooyin loo baahan yahay si ay u gudbiyaan qaybo, qalabka waxaa inta badan ka qaalisan maxaa yeelay, waxay ka samaysan yihiin in blocks leh aad u yar xeerka madax banaan halkii saldhiga; ay adagtahay in la sameeyo geeddi socodka saxaafadda u baahan in qayb ka mid ah ka tago strip (tusaale ahaan beading, necking, laad flange, ka rogid thread , Gurdanka Rotary iwm).
Dhinto ayaa waxaa sida caadiga ah laga sameeyey bir qalab ay u adkeysan loading lama filaan sare ku lug leh, xajisto laayeen goynta af badan lagama maarmaanka ah, iyo iska caabin ay sugi lahaayeen ciidamada ku lug leh.
Kharashka waxaa lagu go'aamiyaa tirada qaababka, taas oo loo go'aamiyo waxa tooling u baahan doontaa in la isticmaalo. Waxaa lagula talinayaa in ay sii sifooyinka sida fudud ee suurtogalka ah si ay u sii kharashka tooling in ugu yaraan. Features in wada dhow yihiin soo saaro dhibaato sababtoo ah ma laga yaabaa in ay bixiyaan ansixin ku filan tasoo ah, taas oo keeni karta in saldhiga kale. Waxa kale oo ay noqon kartaa dhibaato in ay jeexan cidhiidhi iyo protrusions.
Tusaale fiican oo wax soo saarka ee ku dhinta horumar waa daboolka of a kartaa sharaabka . Tab la jiido ayaa la dhigay in ka mid ah geeddi-socodka Gurdanka horusocod iyo daboolka & shirka lagu sameeyaa kale, tab la jiido ee isku mar quudinta xagasha midig geedi socodka daboolka & kiniisadda.
waqti Post: Jul-10-2017
Cinwaanka: no.12 HuangJiaXiang Road, LanJiang Street, YuYao City
Waa Maxay wax taaj oo kale duritaanka caaga
Waa Maxay The Qaybo naxaas CNC Machining